- Miyuu yahay tendonitis ama tendinosis?
- Ma tendonitis ama dhaawac jilibka ah?
22 / 02 / 2016 /0 Comments/i cilmi, tayada Articles, Murqaha iyo Skeleton/av waxyeelladayda
Tendonitis waa erey si joogto ah loo isticmaalo. Aad ayey u badan tahay haddii aad weydiiso cilmi-baarista. Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay muujisay in jeermis badan oo la tirtiray ayan ahayn caabuq (tendinitis), laakiin ay tahay dhaawac xad-dhaaf ah oo ku dhaca murqaha (tendinosis) - haddana waa kiiska in badan oo ka mid ah baaritaanadan si khaldan loogu yeero gaaray bowdada. Maxay muhiim u tahay in la kala saaro labadan, waxaad dhahdaa? Haa, maxaa yeelay daaweynta ugu fiican ee labadoodaba aad ayey uga duwan tahay midba midka kale. Markaa kala soocid habboon ayaa lagama maarmaan u ah in la helo daaweynta ugu fiican ee suurtogalka ah iyo in la hubiyo horumarka shaqada ee ugu habboon. Xaalado badan, waxay noqon kartaa xalka si looga fogaado dhibaato muddo dheer / daba-dheer.
Laakiin, miyaan qabaa cudurka loo yaqaan 'tendonitis'? Or?
Ka fikir xanuunka, dareenka gubashada ee aagga, hoos u dhaca awoodda iyo dhaqdhaqaaqa - kuwaas oo dhammaantood u muuqda inay si xun u saameeyeen hawl maalmeedka. Waa inay ahaataa astaamaha cudurka loo yaqaan 'tendonitis'? khalad. Daraasado dhowr ah (Khan et al 2000 & 2002, Boyer et al 1999) waxay muujiyeen in astaamahan ay ku dhacaan inta badan jeermiska marka loo eego tendinitis. Cilad caadi ah oo badanaa qalad loogu yeedho tendinitis waa tennis xusulka / dambe ee epicondylite - waa xaalad loo yaqaan 'tendinosis'. Daraasad dib-u-eegis nidaamsan ayaa muujisay in calaamadaha caafimaad ee caabuq ba'an ama dabadheeraad ah weligood laga helin hababka qalliinka ee bukaanada laga helay suxulka teniska ee daba-dheer / epicondylitis lateral (Boyer et al, 1999).
Falanqeyn kale oo meta ah oo fiirisay taariikhiga, natiijooyinka immunohistochemical iyo daraasadaha mikroskoobka wuxuu ku soo gabagabeeyey suxulka tennis / lateral epicondylitis waa kansarka loo yaqaan 'tendinosis' mana ahan tendinitis (Kraushaar et al., 1999). Waxaan xasuusanahay in daraasadaha dib-u-eegista habaysan / metala-dariiqooyinka ay yihiin qaabka ugu sareeya daraasadda daraasadda.
Waa maxay farqiga u dhexeeya tendonitis (tendinitis) iyo dhaawaca tendon (tendinosis)?
Halkan waxaan isku dayi doonaa oo aan ku sharixi doonaa farqiga u dhexeeya sida loo yaqaan 'tendinitis' iyo sida loo yaqaan 'tendinosis'.
Cudurka loo yaqaan 'tendonitis' waa mid caabuq jeex jeexan lafteeda oo dhaca sababo la xiriira microcracks oo dhacay markii qeybta musculotendinous ay si xad dhaaf ah u buux dhaafto oo leh gantaal culus oo xoog badan ama kadis ah. Haa, cudurka loo yaqaan 'tendonitis' waa cudur lagu ogaanayo inuu dad badan ku dhici karo, laakiin cilmi baaris ayaa muujisay in cudurkan si weyn looga takhalusay.
Iyo tendinosis (dhaawac soo gaaray) waa cilad ku timaadda fiilooyinka kolajka ee ka jawaab celinta xad-dhaafka daba dheeraaday - si kale haddii loo dhigo marka xad-dhaafku sii socdo xitaa ka dib marka astaamuhu jiraan. Tani waxay keeneysaa in muruqyada aan la bogsan / la soo celin, oo waqti ka dib waxaan leenahay dhaawac xad dhaaf ah oo ku saabsan murqaha - tendinosis. Waxaa ugu wanaagsan in si dhab ah loo qaato astaamaha markii ugu horreysay ee ay dhacaan. Way fududahay in laga hortago intii la daaweyn lahaa.
Inta badan xanuunnada noocan ahi waxay dhacaan waqti kadib. Weydii naftaada: Waxyeeladu si lama filaan ah ma u dhacday ama ma ogtahay in muddo ah?
Daaweynta dhibaatooyinka tendon: Waa muhiim in la kala sooco tendinitis iyo tendinosis!
Waxaa laga yaabaa inaad durba bilawday inaad fahanto in xanuunka loo yaqaan 'tendonitis' iyo tendinosis lagu daaweeyo laba siyaabood oo kaladuwan. Cudurka loo yaqaan 'tendinitis', ujeedada ugu weyni waa in la yareeyo bararka / bararka - oo sida aan ognahay, majiraan wax cillad ah oo ka jira tendinosis. Tani waxay ka dhigan tahay in daaweynta ka-hortagga cudurka loo yaqaan 'tendonitis' aysan qasab ahayn inay wax ka taraan tendinosis. Tusaale waxaa ah ibuprofen (Ibux). Tan dambe ayaa si wax ku ool ah u daaweyn doonta 'tendinitis', laakiin run ahaantii waxay ka hortegi doontaa bogsashada tendinosis (Tsai et al., 2004). Tusaalahan wuxuu lahaan karaa cawaaqib xumo muddo dheer haddii qofka dhab ahaan lahaa tendinosis lagula taliyay xanuun joojiyeyaasha ka hortagga xanuunka halkii uu ka heli lahaa daaweyn habboon.
duritaanka cortisone, oo isku jir ah Xylocaine suuxinta iyo corticosteroid, ayaa lagu soo qaatay daraasadahaas Waxay joojisaa bogsashada dabiiciga ah ee korantada iyo sidoo kale waa sabab aan toos ahayn ee jeexitaanka jilibka mustaqbalka iyo jeexjeexa jilibka (Khan et al, 2000; & Boyer et al, 1999). Si kale haddii loo dhigo, qofku waa inuu si dhab ah u weydiiyaa su'aasha - tani faa'iido ma yeelan doontaa? - ka hor inta aanad cirbadda noocan ah bixin. Cortisone waxay yeelan kartaa saameyn wanaagsan oo muddo-gaaban ah, laakiin waxaa jira halista ka sii darida xaalada markii aad fiiriso muddada dheer. Marka muxuu ugu fiicnaaday duritaanka kadib duritaanka? Hagaag, mid ka mid jawaabaha ayaa kujira nuxurka: Xylocain. Dawada suuxinta ee wax yeeleysa waxay dareemeysaa in xanuunka deegaanka uu si dhakhso leh u sii daayo, laakiin maskaxda ku hay inay aad u fiicnaan karto inay run noqoto - ugu yaraan muddada dheer.
Si kadis ah, waxaa jira daawooyin iskudhaf ah Markay noqoto daawaynta tendinitis iyo tendinosis. Duugista qotodheer ama duugista aaladda caawisa (tusaale ahaan Graston) runti waa faa'iido u leedahay labada xaaladood, laakiin laba siyaabood oo kaladuwan. Cudurka loo yaqaan 'tendinitis', noocani daaweyntu wuxuu yareyn doonaa u-adkeysi iyo wuxuu soo saari doonaa unugyo jilicsan ka dib markii caabuqa uu dillaaco. Marka la eego nabaro isku daweyn ah, daweyntu waxay kicin doontaa waxqabadka fibroblast iyo wax soo saarka collagen (Lowe, 2009).
-1- Daaweynta loo yaqaan 'tendinitis / tendonitis
waqti ayuu bogsiinayay: Maalmaha illaa lix toddobaad. Waxay kuxirantahay marka ogaanshaha cudurka la sameeyo iyo daaweynta ayaa bilaabaneysa.
Ujeedada: Xakamee habka caabuqa.
tallaabooyinka: Naso iyo dawooyinka lidka ku ah cudurka. Duugista suuxdinta qotoda dheer ee suurtagalka kadib markii caabuqa uu yaraaday.
-2- Daaweynta dhaawaca 'tendinosis / tendon dhaawaca
waqti ayuu bogsiinayay: 6-10 toddobaad (haddii xaalada lagu ogaado marxalad hore). 3-6 bilood (haddii xaaladdu noqotay mid ba'an).
Ujeedada: Dhiirrigeli bogsashada oo soo gaabi waqtiga bogsashada. Daaweyntu waxay yareyn kartaa dhumucda jilibka dhaawaca ka dib waxayna hagaajin kartaa wax soo saarka kolajka si markaa muruqyadu ay dib ugu soo noqdaan xoogoodii caadiga ahaa.
tallaabooyinka: Nasashada, tallaabooyinka ergonomic, taageero, fidinta iyo dhaqdhaqaaqa muxaafidka, qaboojinta, jimicsiga eccentric. shaqada muruqyada / daaweynta jir ahaaneed, abaabul wada jir ah iyo nafaqo (waxaan uga wada hadlaynaa si faahfaahsan qodobka).
Ugu horreyn, bal aan ka fiirsanno bayaankan ka soo baxay daraasad ballaaran: "Markii dambe waxay qaadataa in ka badan 100 maalmood inay dhigto kolajka cusub" (Khan et al, 2000). Tani waxay ka dhigan tahay in daaweynta dhaawaca jilibka, gaar ahaan midka aad muddo dheer qaadatay, ay qaadan karto waqti, laakiin daaweyn ka raadsato takhtar si guud loo oggol yahay (physiotherapist, chiropractor ama therapist manual) oo aad ku bilowdo tallaabooyinka saxda ah maanta. Qaar badan oo ka mid ah tallaabooyinka aad adigu sameyn karto naftaada, laakiin xaaladaha qaarkood oo aad u daran ayaa faa'iido leh Shockwave Therapy, irbad iyo daweyn jireed.
Daaweynta iyo tillaabooyinka lahaanshaha ah ee dhaawacyada lugaha
Nasashada: Bukaanka waxaa lagula talinayaa inuu dhagaysto calaamadaha xanuunka ee jirka. Haddii jidhkaagu ku weydiiyo inaad joojiso wax -qabadka, markaa si fiican baad u dhegeysanaysaa. Haddii hawsha aad qabanayso ay ku xanuuniso, markaa kani waa habka jidhku kuugu sheego inaad samaynayso "waxoogaa aad u badan, xoogaa dhakhso ah" iyo inaysan haysan waqti ay ku soo kabato ku filan inta u dhexeysa kalfadhiyada. Jebinta-yar-yar ee shaqadu waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh, shaqada soo noqnoqota waa inaad qaadataa nasasho 1-daqiiqo ah 15-kii daqiiqaba iyo nasasho 5-daqiiqo 30-kii daqiiqoba. Haa, maareeyuhu malaha ma jeclaan doono, laakiin wuu ka fiican yahay jirro.
Qaado tallaabooyinka ergonomic: Maalgashiga yaryar ee ergonomic waxay sameyn karaan isbadal weyn. Tusaale ahaan. Markii aad ka shaqeyneyso xogta, u oggolow in curcigu ku nasto meel dhexdhexaad ah. Tani waxay keenaysaa culeys aad u yar xagga qalabka gacanta.
U adeegso taageero aagga (haddii lagu dabaqi karo): Markaad dhaawacan tahay, iska hubi in aagga aan loo hoos gelin xoogag gantaalaha la mid ah oo iyagu ahaa sababta dhabta ah ee dhibaatada. Caadi ahaan waa ku filan. Tan waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo adeegsanayo taageerada aagga uu dhaawaca ku yaallo ama haddii kale, waxaa lagu isticmaali karaa cajalad isboorti ama kinesio cajalad.
Kala bixi oo soco dhaqdhaqaaqa: Fidinta joogtada ah ee iftiinka iyo dhaqdhaqaaqa aagga ay dhibaatadu saameysey wuxuu hubin doonaa in aaggu uu sii wado dhaqdhaqaaqa caadiga ah uuna ka hortago gaabinimada murqaha la xiriira. Waxay kaloo kordhin kartaa wareegga dhiigga ee aagga, kaas oo gacan ka geysta habka bogsashada dabiiciga ah.
Adeegso jiing: Jilaabashada waxay astaan ​​u noqon kartaa calaamadaha, laakiin iska hubi inaadan u isticmaalin jalaatada wax ka badan inta lagugula taliyay iyo weliba inaad hubiso inaad haysato shukumaan dhuuban oo khafiif ah ama wax la mid ah agagaarka barafka. Talobixinta bukaan-socod eegtada badanaa waa 15 daqiiqo aagga ay dhibaatadu saameysey, ilaa 3-4 jeer maalintii.
Layli: Tababbarka xoogga xoogga (wax dheeraad ah ka sii akhri iyada iyo daawashada fiidiyowga) oo la sameeyo 1-2 jeer maalintii muddo 12 toddobaad ah ayaa saameyn caafimaad ku yeeshay caloosha (tendinopathy). Waxaa la arkay in saameyntu ay ugu weyn tahay haddii dhaqdhaqaaqa uu xasillo oo la xakameeyo (Mafi et al, 2001).
Raadi daaweyn hadda - ha sugin: Caawimaad ka hel dhakhtar si aad "uga gudubto dhibaatada" si ay kuugu sahlanaato inaad samayso tallaabooyinkaaga. Dhakhtar caafimaad ayaa kaa caawin kara daaweynta mawjadaha cadaadiska, daaweynta cirbadda, shaqada jireed iyo wixii la mid ah si ay u siiyaan hagaajin xagga shaqada ah iyo calaamadda oo kale.
nafaqada: Faytamiin C, manganese iyo zinc dhammaantood waxay lagama maarmaan u yihiin soosaarka kolajka - dhab ahaantii, fiitamiin C wuxuu sameysmaa wax ka soo baxa waxa isku beddela kolajka. Faytamiin B6 iyo fiitamiin E ayaa sidoo kale si toos ah loola xiriiriyay caafimaadka muruqyada. Marka hubinta inaad haysato cunto kaladuwan oo wanaagsan, kaladuwan waa muhiim. Waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqon doonto in waxoogaa nafaqo ah lagu qaato cuntada marka bogsigu dhaco? Xor ayaad u tahay inaad la tashato nafaqeeye ama wixii la mid ah.
- Liinta, liinta iyo cagaarka kale waa kaabis aad u fiican markaad u baahan tahay fitamiin C.
En gaaray bowdada had iyo jeer maahan tendonitis - dhab ahaantii, waa wax aad u badan in dhaawaca uu yahay tendinosis. Waxaan rajeyneynaa inaad fahantay muhiimadda baaritaanka saxda ah iyo dhibaatooyinka ay u yeelan karto bukaanka haddii go'aanka cilad-sheegashada aan lagu salayn qaab sax ah.
Noqo mid dhaleeceeya, weydii su'aalaha - si dhab ah u tixgeli.
Alexander… iyo kooxda kale ee jir ahaaneed ee Vondt.net (Nagala soco Facebook)
Sidoo kale aqri: Tababbarka loo yaqaan 'ecentric training' ee xusulka tennis / lateral epicondylitis
PAGE xiga: Cadaadiska mowjadaha cadaadiska - waa daaweyn wax ku ool ah oo loo yaqaan 'tendinopathies'
Sidoo kale aqri: 6 Layliyo ka dhan ah Carpal Tunnel Syndrome
Khan KM, Cook JL, Kannus P, et al. Waqtiga looga tagaayo khuraafaadka 'tendinitis': Xanuun badan, iyo xanuunno badan oo xaaladaha lugaha ay ku badan yihiin waa xanuun aan xanuun lahayn [tifaftirka] BMJ. Waxaa la daabacay Maarso 16, 2002.
Heber M. Tendinosis vs. Soo kacay. Daaweynta Ciyaaraha Elite.
Khan KM, Cook JL, Taunton JE, Bonar F. Isticmaalka tendinosis, ma ahan tendinitis qeybta 1: muuqaal cusub oo ku saabsan dhibaato caafimaad oo adag.
Caafimaadka Ciyaaraha 2000 May; 28 (5): 38-48.
Boyer MI, Hastings H. Suxulka teniska dambe: "Miyuu jiraa wax cilmi ah?".
J Garabka xusulka Surg. 1999 Sep-Oktoobar; 8 (5): 481-91. (Daraasad dib-u-eegis nidaamsan / falanqayn meta ah)
Kraushaar BS, Nirschl RP. Tendinosis xusulka (tennis xusulka). Astaamaha caafimaad iyo natiijooyinka baaritaanka taariikhiga ah, immunohistochemical, iyo daraasadaha microscopy-ga elektiroonigga ah.
J Bone Joint Surg Am. 1999 Feb; 81 (2): 259-78. (Dib-u-eegis habaysan / meta-falanqayn)
Tsai WC, Tang FT, Hsu CC, Hsu YH, Pang JH, Shiue CC. Xakamaynta Ibuprofen ee kordhinta unugyada maskaxda iyo hagaajinta xakamaynta cyclin kinase inhibitor p21CIP1.
Rattray F, Ludwig L Therapy Massage Therapy: Fahmitaanka, Qiimeynta iyo Daaweynta In ka badan 70 xaaladood. Elora, Ontaariyo: Talus Inc; 2001.
Lowe W. Fikradda Masaajidka jirka iyo Farsamada. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier; 2009.
Alfredson H, Pietila T, Jonsson P, Lorentzon R. Tababbarka murqaha culus ee culeyska culus ee culeyska loogu talagalay daaweynta daweynta xanuunka loo yaqaan 'Achilles tendinosis' ee dabadheer.;Am J Sports Med. 1998. 26(3): 360-366.
Mafi N, Lorentzon R, Alfredson H. Natiijooyinka muddada-gaaban ah ee tababarka muruqyada sccentric muruqmaalka ah marka la barbar dhigo tababbarka xoogga ee daraasadda dhaqamada kala-duwanaanta ah ee bukaanka qaba xanuunka daran ee xanuunka loo yaqaan 'Achilles tendinosis'; Qalliinka Isboortiga Gaarka ah ee Qalliinka Jirka (Arthroscopy). 2001 9(1):42–7. doi: 10.1007/s001670000148.
Tags: gaaray bowdada, dhaawac soo gaaray, soo kacay, Tendinosis
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Vondt-i-albuen-700px.jpg?media=1648573622 467 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-02-22 22:44:502018-10-01 12:37:21- Ma tendonitis ama dhaawac jilibka ah?
- Qaadashada Paracetamol inta lagu guda jiro uurka waxay sababi kartaa neefta caruurta Daaweynta 'Alzheimer' cusub waxay soo celineysaa shaqadii xusuusta oo buuxda!